कसरी भएका थिए साउदी पत्रकार बेपत्ता ? भिडिओ सार्वजनिक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कसरी भएका थिए साउदी पत्रकार बेपत्ता ? भिडिओ सार्वजनिक
बीबीसी । टर्कीका सञ्चारमाध्यमले साउदी पत्रकार जमाल खशोगीलाई बेपत्ता पारिएको घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण भन्दै सीसीटीभी दृश्य सार्वजनिक गरेका छन्।
इस्तानबुल विमानस्थलका ती दृश्यमा साउदी अरेबियाका सम्भावित गुप्तचरलाई टर्की प्रवेश गरेको र छोडेको देखिन्छ।
पहिला राम्रो सम्बन्ध भएपनि पछि साउदी राजपरिवारको कटु आलोचक बनेका पत्रकार खशोगी टर्कीस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासबाट गत अक्टोबर २ देखि बेपत्ता भएका बताइको छ।
टर्कीका अधिकारीहरूले खशोगीको हत्या भएको बताएका छन्। तर साउदी अरेबियाले त्यसको खण्डन गरेको छ।
सुरक्षा निगरानीका लागि राखिएको एउटा क्यामेराबाट खिचिएकोजस्तो देखिने एउटा भिडिओ टर्कीको टीआरटी वर्ल्ड च्यानलले प्रसारित गरेको छ।
त्यस भिडिओमा काला भ्यानसमेत केही गाडीहरू साउदी वाणिज्य दूतावाससम्म गएको देखिन्छ। यिनै दृश्य अनुसन्धानको केन्द्रविन्दुमा रहने विश्वास गरिएको छ। साथै साउदी पुरुषका विभिन्न समूहहरू इस्तानबुल विमानस्थल हुँदै टर्की आएर होटेलमा प्रवेश गरेका र पछि देश छोडेका दृश्य पनि छन्।